June 13, 2019 - Update New
June 13, 2019 Naing 0
လူမှုစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ လူကြည့်များနေတဲ့ နန်းမွေစံရဲ့ အကြမ်းစား ဗီဒီယိုဖိုင် ဆက်စီမော်ဒယ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ နန်းမွေစံဟာဆိုရင် သူမရဲ့ စွဲမက်ဖွယ်ရာ ကောက်ကြောင်းအလှ နဲ့ ဆက်စီ ကျတဲ့ ပုံရိပ်တွေကြောင့် ပုရိသတွေကြားမှာ နာမည်ကြီးသူပါ။ အမိုက်စားပုံရိပ်တွေနဲ့လည်း ပုရိသ ယောကျာ်းတွေကို ဆွဲဆောင်ထားတဲ့ သူမက လက်ရှိမှာ သူမရဲ့ […]
ချစ်သူကို SURPRISE လုပ်ဖို့သွားရာမှ မျက်ရည်လည်ရွဲဖြစ်ကာကြေကွဲခဲ့ရတဲ့ကောင်လေး
ချစ်သူကို SURPRISE လုပ်ဖို့သွားရာမှ မျက်ရည်လည်ရွဲဖြစ်ကာကြေကွဲခဲ့ရတဲ့ကောင်လေး နှလုံးသားအရေးမှာ ရင်နင့်နေအောင် ချစ်ရတဲ့ကိုယ့်ချစ်သူလေးက တခြားတစ်ယောက်နဲ့သစ္စာဖောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးလောက် ဘယ်အဖြစ်အပျက်ကမှ ကြေကွဲစရာအကောင်းပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့တွေ့ရင်တော့ အကောင်း၊ နောက်ကွယ်မှာတော့ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ ကိုယ်ထက်တောင်ကြည်နူးနေသေးတယ်ဆိုတာမျိုးက တွေးမကြည့်ရဲလောက်အောင် ဆိုးရွားလွန်းလှပါတယ်နော်။ အကယ်၍ ချစ်သူလေးကို အံ့သြသွားစေဖို့ သူမသိအောင် သွားတွေ့ကာမှ သူကတော […]
တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း . ( 13.6.2019 မှ 19.6.2019 )အထိ
တစ်ပတ်စာ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း . ( 13.6.2019 မှ 19.6.2019 )အထိ တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် ဒီကာလအတွင်း အလုပ်တွေများနေတာကြောင့်ပဲ အချိန်တွေဘယ်လိုကုန်သွားမှန်းမသိအောင်ဖြစ်ရတတ် ပါတယ်။ အပင်ပန်းခံမှုတွေကြောင့်လဲ ၀ီရိယအကျိုးတော့ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဖခင် ဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့အထက်လူကြီး ကျန်းမာရေးညံ့နိုင်တာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းတာ၊အလုပ်တာဝန်ပြောင်းလဲ လုပ်ကိုင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အပြောင်းအရွှေ့လုပ်မယ်လို့ သတင်းကြားနေရင်တော့ မိမိနယ်ပြောင်းရ […]
အချုပ်တရားခံအားလာတွေ့သူ အမျိုးသမီးကို မသင်္ကာလို့ မိန်းမကိုယ် ကို ရဲမေမှ စစ်လိုက်တဲ့အခါ
အချုပ်တရားခံအားလာတွေ့သူ အမျိုးသမီးကို မသင်္ကာလို့ မိန်းမကိုယ် ကို ရဲမေမှ စစ်လိုက်တဲ့အခါ အချုပ်တရားခံအား ဧည့်တွေ့လာသူ အမျိုးသမီး၏ မိန်းမကိုယ်အတွင်းမှ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေပြား(၉၉)ပြား ရှာဖွေတွေ့ရှိ ဇွန်လ ၁၂ ရက် နေ့ခင်း ၁:၁၅ နာရီအချိန်တွင် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် CRO ရုံးထုပ် အချုပ်တရားခံအားဧည့်တွေ့လာသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦး […]
၁၀တန်းဖြေဖူးတာနဲ့ တက်လို့ရမယ့် မြန်မာ/ကိုးရီးယား မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်တပ်ဆင်သင်တန်းကျောင်း
၁၀တန်းဖြေဖူးတာနဲ့ တက်လို့ရမယ့် မြန်မာ/ကိုးရီးယား မော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်တပ်ဆင်သင်တန်းကျောင်း ကိုယ့်သားသမီး ၁၀တန်းဖြေပြီးကျတဲ့သူဘဲဖြစ်ဖြစ် အောင်တဲ့သူဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသင်တန်းတက်ခိုင်းရမလဲဆိုတာဝေ ခွဲမရဖြစ်နေရင် အကြံတစ်ခုပေးပါရစေ။ မကွေးမြို့နဲ့ ၁၀မိုင်လောက်ဘဲဝေးတဲ့ မကွေး-တောင်တွင်းလမ်းနဲ့ ၃မိုင်ကျော်ကျော်လောက်ဘဲဝေးတဲ့ မယ်လှတောင်ရွာအဝင်လမ်းအတိုင်းသွားလို့ရှိရင် အစိုးရမော်တော်ယာဉ်သင်တန်းကျောင်းကိုရောက်ပါမယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ ကိုးရီးယားပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မော်တော်ယာဉ်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများ ဝါယာရိန်းပြုပြင်တပ်ဆင်ခြင်းများ တွင်ခုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာများကို စာတွေ့ရောလက်တွေပါ ကွန်ပြူတာများနှင့်ပါမကျန် […]
မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီး ငယ်စဉ်က ဥာဏ်ကောင်းပုံများ
မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီး ငယ်စဉ်က ဥာဏ်ကောင်းပုံများ ဥာဏ်ကောင်းလိုက်ပုံများ မင်းကွန်းဆရာတော် ငယ်ငယ်တုန်းက ဟိန္ဒီကုလားကိုရင်ကြိးထံ ၌ သက္ကတဘာသာ ကို ၁ ရက်သင်ဖူးခဲ့တယ် တဲ့ ထို ၁ ရက်ကလေး သင်ကာမျှနဲ့ ´သက္ကတသိက္ခာ မဉ္ဇရီ `ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကို […]